Samsung က Galaxy Fold အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုသည် Androidsis
Samsung က က galaxy ခေါက်, ၎င်း၏ပထမဆုံးခေါက်စမတ်ဖုန်းလွန်ခဲ့သော ၂ လကျော်ကဖေဖော်ဝါရီလလယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တင်ဆက်သည့်အချိန်တွင်၎င်းသည်အမှန်တကယ်တီထွင်ထားသော terminal နှင့်လက်ရာပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်တူသည်။ အိမ်ထောင်ဖက်က X Huawei ၏ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည်။
ကြေငြာပြီးမကြာခင်မှာပဲ Samsung ကဒီပစ္စည်းတွေအတွက်မော်ဒယ်များစွာကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တယ် YouTuberseသြဇာသူတို့လုပ်ဖို့အဘို့ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း နှင့်ကုမ္ပဏီ၏၎င်း၏မြှင့်တင်ရေးအဘို့အထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, အချို့သောလမ်းအတွက်မြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်, အရာအလွန်ကောင်းစွာမသွားခဲ့ပါဘူး သင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူစိုးရိမ်ဖွယ်ရာပြproblemsနာများ၎င်း၏ "ချို့ယွင်းချက်" ကိုဖော်ထုတ်ပြီး terminal ကိုယုံကြည်မှုနည်းပါးစေသည်။ ဒီပြီးနောက်ယခုတစ် အသစ်သောမူပိုင်ခွင့်ခေါက်မိုဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သမျှအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ပြသ. ကြည့်ရအောင်
မူပိုင်ခွင့်ဖြင့်ထုတ်ဖော်သောအရာကိုအရသိရသည် မူပိုင်ခွင့်ကို Apple, စမတ်ဖုန်းကိုခေါက်ထားသည့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အစုလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံအကြားညှိနိုင်သည်, Galaxy Fold နှင့် Mate X တို့နှင့်ဆင်တူသည်။ ပထမ box သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် display panel ၏ပထမအခြမ်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ဒုတိယ box သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် display panel ၏ဒုတိယဘက်နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်။ (ရှာဖွေရန် - ဤအကြောင်းကြောင့် iFixit ၏အဆိုအရ Galaxy Fold ၏ဖန်သားပြင်များပြတ်တောက်သွားသည်။
၎င်းသည်ပထမအကွက်ကိုဒုတိယအကွက်နှင့်ဆက်သွယ်ပေးသော link member ကိုလည်းသယ်ဆောင်သည်။ နှင့်တည်ငြိမ်စေရန်, device ကိုဖွင့်လှစ်သည့်အခါပထမ ဦး ဆုံးသေတ္တာများနှင့်ဒုတိယ box ကို၏ခေါက် ဦး တည်ချက်အတွက်လှည့်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ configured သောသော့ခတ်ယူနစ်။
သော့ခတ်ယူနစ်တွင်လျှောဖုံးပါရှိသည်, အလှည့်ပထမ ဦး ဆုံး box ကို coupled နှင့် slidably ဒုတိယ box ကိုမှပူးတွဲပါလိမ့်မည်။ ပထမသေတ္တာနှင့်ဒုတိယအကွက်ကိုခေါက်ထားသည့်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်လည်ပတ်မှုပုံစံတို့အကြားခေါက်ထားသည့် display ယန္တရားကိုရွှေ့ပြောင်းရန်လျှောအဖုံးသည်ဒုတိယဖြစ်ရပ်တွင်ရထားလမ်း slot တစ်လျှောက်တွင်လျှောနိုင်သည်။
ဒါဟာပြီးပြီဒီဇိုင်းကိုကြည့်ဖို့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်, ဖြစ်စေ rendering (ပေါ်ပေါက်လျှင်) သို့မဟုတ်တစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းအတွက်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သတင်းအချက်အလက်များသည်များစွာသောထင်မြင်ချက်များကိုအသက်ဝင်စေခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်၎င်းသည်၎င်းကိုဖြန့်ချိမည်၊ မထုတ်လုပ်မည်၊ သို့မဟုတ်က Galaxy Fold အတွက် Samsung ကကမ်းလှမ်းမည့်ပြတ်သားသောရွေးချယ်စရာဖြစ်မလားဟူသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြခဲ့သည်။
Samsung ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ပထမဆုံးခေါက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းကိုစွန့်လွှတ်။ မရအောင်၊ Samsung သည်၎င်း၏စမတ်ဖုန်းကိုဈေးကွက်တွင်မကြာမီဖြန့်ချိရန်စီစဉ်နေပြီး၎င်း၏မျက်နှာပြင်နှင့်ပြproblemsနာများမပြေလည်သေးသောကြောင့်၎င်းသည်အလင်းကိုတစ်ချိန်ချိန်မြင်ရလိမ့်မည်။ အလားတူပင်၊ ဤမူပိုင်ခွင့်ပေါ်ပေါက်လာသည်ဟူသောအချက်ကညွှန်ပြနေသည် မကြာခင်မှာပဲ Samsung ထက်အခြားမော်ဒယ်လ်တစ်ခုလည်းထွက်လာပြီးခေါက်လို့လည်းရနိုင်ပါတယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung ကခေါက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုမူပိုင်ခွင့်တင်လိုက်သည်။ ၎င်းသည် Galaxy Fold နှင့်အစားထိုးမည်လား။
Galaxy M10, M20 နှင့် M30 တွင်မကြာမီ Android Pie ရရှိမည်ဖြစ်သည်